China Slimming cream Kugadzira uye Fekitori | Wangtong
Nhungamiro yekutsvedza kirimu inowanzoenderana nekudzikamisa, zvikamu zvemadhiraini, caffeine, capsaicin kukurudzira kupera kwemafuta, mhanyisa kutenderera kwemukati kwemetabolism kunze.
Kunze kwekunge iwe ukaomerera pakushandisa uye kukwiza muviri, kumhanyisa kwemhedzisiro kunogona kufungidzirwa kuve kunonoka, zvakare, kudiwa kwekubatanidza kufamba uye kukwiza matekinoroji.
Ipfupi-temu mhedzisiro yenzira yekumhanyisa ndeyekuti, zora kirimu yemuviri kukwiza kunwa mushure mekufamba.
Inogona zvakare kuputirwa mupurasitiki kuputira kusimudzira dikita nekusimbisa kurema kwemuno kurasikirwa.
Inosimudza zvigadzirwa zvekirimu zvishoma zvekushandisa kwekunze chete, zora paganda kudzikisa hypodermic uye adipose, kuita kuti muviri uve wakasimba uye wakanaka kune yakasarudzika kirasi yezvizoro zveganda, kusanganisira ese marudzi emafuta anopisa, kuchengetedza ganda "rezvinhu. Uchishandisa wega, unogona kupisa mafuta, kubvisa ganda reorenji, sungisa ganda rakasununguka, kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waitwa.
Mazhinji ekushandisa kwekunze kwezvishoma zvigadzirwa ndeye kushandiswa kwemishonga yemusango mukubuditsa zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinobudirira, izvi zvinoshanda chinhu zvinogona kuiswa kuunganidza mafuta akawandisa subcutaneous tishu, kusimudzira ganda microcirculation uye kudzikisa kuwanda kwemafuta, kuzadzisa chinangwa che muviri mutete.
Tea polyphenols - Yakapfuma GTP, yakagadzirwa ine basa rakasimba mukubvisa zvinokuvadza zvemahara radicals, kudzivirira nguva isati yakwana oxidation.
Mvura, Liquid Parafini, Ethyl Hexyl Palmitate, Cetearyl Doro, Polydimethylsiloxane, Glycerin, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Doro Polyether-25, Cetearyl Doro Polyether-6, Chamomilla Recutita Ruva Bvisa, Allantoin, Laarbodium Sodium
Disodium, butyl hydroxyl toluene, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, vanillin butyl ether, kaviri (hydroxymethyl) imidazolidyl urea, sodium hydroxide.
Paunenge uchishandisa kirimu yekutsvedza, zvikamu zvakasiyana zvinoda matekinoroji akasiyana. Mukudaro, inowanzo kubva pachinzvimbo chiri kure kure nemoyo kusvika pachinzvimbo padhuze nehurongwa hwekukwiza muviri, kubva pasi kusvika kumusoro, kubva mukati nekunze nzira yekukwiza muviri.
Isa kirimu inotsvedza zvakaenzana padumbu, uye wozora zvinyoro-nyoro kutenderera wachi kusvikira chigadzirwa chanyura zvachose.
Chanza chemaoko maviri chinogonawo kushandiswa pakushambadza ganda remudumbu, kuti ikurumidze kufamba kweropa, batsira ganda kukumwa kwezvinhu zvinoshanda.
Kuti ushandise pamakumbo, isa tsoka dzako pakakwirira uye wozora kirimu kadiki kune zvidya zvako.
Isa zvigumwe zvemaoko ako maviri pazvidya, isa kumanikidza kuzvigumwe, uye sunga mimwe minwe woitsvaira uchienda kune zvigumwe.
Dzokorora kubva pachidya chako nzira yese kusvika pamabvi ako.
Kazhinji, kirimu yekutsvedza inoshandiswa mushure memaminetsi mashoma kutanga kushanda, inogona kutora maawa akati wandei. Mamwe marangi nekuda kwemusiyano wezvakagadzirwa uye nekubudirira slimming kirimu, haina chero pfungwa yemuviri. Chikamu chekushandiswa kwekirimu inotsvedza yeiyo fever yemuno, kushanda kunopihwa pekutanga nemafuta emuno, kupisa moto wecapsicum kana caffeine, izvo zvekare zvinonakidza uye zvine chekuita nehutachiona, iyo yekupedzisira iri yakapfava uye inoshanda. iko kunzwa kwerudzi urwu rwechinzvimbo chinonyanya kukoshesa kuitira kusimbisa ganda, ganda rine simbi yakasimba uye yakasimba. Kana mukushandisa kusagadzikana kana kutsamwa kwenzvimbo, unofanirwa kubva warega kuishandisa.
Nguva yakanakisa yekushandisa
1. Muka mangwanani, inguva, basa remuviri wemunhu ndiro rinonyanya kufadza metabolism nekukurumidza. Pamberi pekutanga kusanzwisisika yekugeza inopisa, uye ipapo daub pamuviri uri muchimiro chekuzora kirimu, inogona kurega iko kudzikisira mhedzisiro yekuwana zvakapetwa mhedzisiro nehafu yekuedza.
2. Mushure mekuenda kumba husiku, kana kutora mukana wemuviri mushure mekugeza kuchiri kupisa zvakanyanya kana uchiita kukwiza-kwese muviri, uchida zvikamu zvidiki zvemuviri zvakaita sekumusoro ruoko, chiuno nemudumbu, chiuno, zvidya, uye imwe kiyi isa masaja, inogona kukwidziridza metabolism yekufamba kweropa, kozoti daub yekutsvedza kirimu, inogona kuita mutete muviri kuita zviri pachena, uye hazvisi nyore kuwedzera.
3. Rovedza muviri metabolism, ita kuti muviri weganda wakakora mukati mekirabhu wadzikira, saka mune yakatetepa yeiri kirimu isati yatanga kurovedza muviri, muviri unogona kukurumidza, kunyatsotora zvinoshanda muslim cream, hutete hutete hunogadzirwa kuti uwane zvisingaite uye zvakajeka.
1. Usati washandisa kirimu yekutsvedza izano rakanaka kushandisa zvinyoro nyoro ourzi muviri kukwesha) bvisa zvakawandisa cutin uye ganda rakafa, vimbisa chigadzirwa chigadzirwa chekusimbisa kuti uwane zvakanakira. Asi chenjera kuti usashandise munzvimbo dzakapfava dzakadai sechifu chinokuya zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kana zvine kuzvimba kana mavanga paganda, ndokumbirawo usashandise, uye vazhinji vanoshandisa kaviri pasvondo.
2. Zhizha rinowanzoda kubvisa bvudzi remumuviri, usati uye mushure mekushandisa kubvisa bvudzi) kana reza, hazvina kukodzera kushandiswa kwezvigadzirwa zvishoma, zvikasadaro zviri nyore kukonzeresa kurwisa, kutsvuka zvikamu zvinokuvara zvekukuvara Muenzaniso haukodzere.
Pashure: Lip mask
Zvadaro: Ruomba ruwoko